I-Logitech Circle 2, ikhamera ebhetyebhetye njengaye | IPhone iindaba
I-Logitech Circle 2, ikhamera eguquguqukayo efana nayo
I-Logitech isizisele inguqulelo yesibini yekhamera yokhuseleko kunye noyilo olutsha kwaye ngaphezulu kwako konke ngokuguquguquka okukhulu. SUkuba ufuna ikhamera yokhuseleko ofuna ukuyisebenzisa ngaphakathi okanye ngaphandle okanye ngaphandle komda wokufuna indawo ekufuphi, Isangqa 2 esitsha esivela kwiLogitech siza kukunika umdla kakhulu.
Sikwazile ukuvavanya imodeli kunye nebhetri edityanisiweyo kangangeeveki ezininzi, engadingi ntambo yombane, kwaye siyakuxelela ngokubonakala kwethu kweli nqaku, ukongeza Iinkcukacha ngokusebenza kwayo kwaye ikubonise iimpawu zayo kwividiyo ukuze nizigwebe.
1 Uyilo lwayo nayiphi na indawo
2 Iimpawu kunye noqwalaselo
3 Isicelo esenziwe kakuhle kodwa ngaphandle kweKhayaKit
4 Izixhobo ezinomdla kakhulu
Uyilo lwayo nayiphi na indawo
Isangqa 2 ikhamera inoyilo onokulubeka ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na indawo ekhayeni lakho ngaphandle kokungqubana. Ngaphakathi okanye ngaphandle awuyi kuba nangxaki, ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlala, eshalofini okanye kwisokethi epasejini. Ukuba yimodeli ngaphandle kweentambo, kunye nebhetri ehlanganisiweyo, awuyi kuba nangxaki xa uyibeka apho ufuna okanye ufuna khona. Kuphela yi-LED yangaphambili ekhanyisayo xa uvuka ekuphumleni eya kuma ngaphambili kwayo emnyama, kwaye umzimba omhlophe ongqukuva ujongeka umhle naphina apho ubeka khona.
Ikhamera ibandakanya indawo yokuma eludongeni kodwa ayiloncedo ukuyibeka ngaphezulu ngaphandle kokuba ufuna ukuyijonga phezulu, kuba ayizukuhlala izinzile ngenxa yobunzima bayo. Ukubeka endaweni ethe tyaba kufuneka uyisebenzise ngaphandle kwesiseko, enkosi kwinto yokuba emazantsi inendawo ethe tyaba apho kukho umsonto ohamba kathathu, ikhamera iya kuhlala izinzile. Nangona kunjalo, iyakuhlala inethambeka elithile eliphezulu. Yinkcukacha ephosiweyo: isiseko esivumela ukujikeleza kunye nokujija njengoko kufuneka.
Iimpawu kunye noqwalaselo
Yikhamera erekhoda kwisisombululo se-FullHD 1080p kwaye ivumela ukubonwa ngokukuko okanye ukulibaziseka ngokubulela kwilog yeLogitech. Ayinako ukugcinwa ngokwasemzimbeni, into ethi ngokuthe ngcembe isasazeke ngakumbi kolu hlobo lwekhamera. Ukuthembela kwiinkonzo zelifu kunezibonelelo ezininzi, kuba akukho mfuneko yokuba sikhathazeke ngayo nantoni na, kodwa bagcina imisebenzi emininzi yokubhaliselwa okuhlawulelweyo, into esiza kuyenza kamva.
Ukumelana nemvula, ukubanda, ubushushu kunye nelanga kukuvumela ukuba ubeke ngaphandle ukuze uyisebenzise ngaphandle. Umbono wasebusuku kunye ne-engile yayo ebanzi evumela intsimi yombono we-180º kuthetha ukuba awuphosi nantoni na eyenzekayo phambi kwekhamera. Inesenzi sentshukumo kunye nebhetri ethi ngokweLogitech ifikelele kwiinyanga ezintathu zokuzimela, nangona oko kuya kuxhomekeka kuqwalaselo olumiselweyo. Imakrofoni eyakhelwe-ngaphakathi kunye nesithethi zivumela unxibelelwano kuwo omabini amacala.
Ukuseta ikhamera kwenziwa ngokupheleleyo kwi-app ekhoyo ye-iOS kunye ne-Android. Yinkqubo elula kakhulu kwaye ekhawulezayo, efuna ukuba ikhamera iqhagamshelwe kumbane. Ikhamera yenzelwe ukuba ihlale ivaliwe kwaye ivuselele, ngaloo ndlela igcina ubomi bebhetri obukhulu. Xa intshukumo ifunyenwe kwicandelo layo lombono, irekhoda ulandelelwano kwaye waziswe ngalo ngokusebenzisa usetyenziso kwi-smartphone yakho.
Ungasoloko usifaka isicelo kwaye ubone okwenzekileyo kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo (simahla) okanye kwiintsuku ezininzi ukuba ukhetha ukuhlawula umrhumo wenyanga okanye wonyaka. Unokumisela ezinye iindlela ezinje ngezaziso ezikrelekrele, ukuze ikulumkise kuphela xa ungekho ekhaya, okanye isisombululo sevidiyo ukuba i-intanethi yakho ayinasisa kakhulu. Izaziso zisebenza kakuhle kakhulu kwaye ukuba sekhaya okanye kude kuyabulela ngokuzenzekelayo kwinto yokuba usetyenziso lusebenzisa indawo ye-smartphone kuyo. Ubuntununtunu bentshukumo yoluvo iya kuba yeyona nto inefuthe ekusetyenzisweni kodwa iya kuba yiyo egqiba ukuba ibhaqe nayiphi na intshukumo okanye eyona icacileyo, into ebalulekileyo ukuba uza kuyisebenzisa njengekhamera yokhuseleko.
Ukuthatha isigqibo sokuba uza kuhlala nesicwangciso sasimahla okanye esihlawulelweyo yinto yobuqu kwaye umntu ngamnye makenze isigqibo ngokusekwe kwiimfuno zabo. Inguqulelo yasimahla ikunika kuphela ukufikelela kwinto ebhalwe kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, ngelixa ukhetho lwePremiyamu (€ 9,99 ngenyanga) Ikunika ithuba lokuba ubone ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30 zokurekhodwa, ukubonwa kwabantu okrelekrele, qwalasela indawo yokujonga intshukumo kunye nezinye iindlela ezinokubangela umdla kuninzi. Ukuthathela ingqalelo amaxabiso ayo nayiphi na inkqubo yokhuseleko ngokujongwa kwevidiyo, ezi € 99,99 ngonyaka zibiza kakhulu.
Isicelo esenziwe kakuhle kodwa ngaphandle kweKhayaKit
Ndothuswe kakhulu sisicelo seLogitech kuba emva kokuzama iikhamera ezininzi zale ndlela ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndiyithandayo. Andisiyonto ingako yokusebenzisa i-iPhone ngokuthe tye, kwaye le app inyanzelisa ukuba uyenze, kodwa ukubuyisela ikunika umbono ohlelwe kakuhle kwaye apho ungabona khona yonke into eyenzekileyo emini, nkqu nesishwankathelo seziganeko. Kwividiyo kweli nqaku ungayibona ngokweenkcukacha.
Kodwa zonke izibonelelo zokusebenzisa ikhamera enikwe ibhetri ziza ngexabiso, kwaye oko kukuthi akukho kungqinelana kweKhayaKit. I-Apple ifuna iikhamera ezihambelana nenkonzo yayo yeedemotic ukuba ihlale ikhona, kwaye ke le Circle 2 ibhetri ayihambelani nelo qela. Nangona kunjalo, ukuba sithenga nasiphi na isincedisi esenza ukuba ibe yikhamera ihlala ixhumeke kumandla, emva koko iba yinto yokufikelela kwiKhayaKit.
Izixhobo ezinomdla kakhulu
ILogitech inezinto ezinomdla kakhulu ezifumanekayo kule khamera ye-Circle 2 eyonyusa ukusebenza kwayo ngokungafaniyo. Isiseko esivumela ukuba sibekwe kuyo nayiphi na iwindow kunye nenye evumela ukuba idityaniswe ngqo kwisokethi bayakwenza loo khamera ibhetri ngokuzenzekelayo ibe yikhamera "yesiqhelo", kwaye njengoko besitshilo ngaphambili ukuba iyahambelana neKhayaKit. Unokuthenga enye ibhetri eyongezelelweyo kwiwebhusayithi ye ucinezela.
Usizi lokuba into esingenakuyenza kukuguqula ikhamera enentambo ibhetri enye ngokuchaseneyo kuba akukho thuba lokuthenga isiseko seentambo ngokuzimeleyo kwaye Icala lebhetri alifanelekanga kwikhamera ngaphandle kwebhetri. Ifestile kunye nesiseko socket sisebenza kunye nenye yezi modeli zimbini, zinentambo okanye ngaphandle kwayo.
I-Logitech Circle 2 enebhetri yenye yeekhamera eziguquguqukayo kudidi lwayo ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuyisebenzisa ngaphandle okanye ngaphakathi kunye nezinto ezahlukeneyo ezihambelanayo ezivumela ukuba ibekwe kwiifestile nakwiivenkile. Ukuhamba kweKhayaKit ngokutshintshela ibhetri ekuvumela ukuba uyibeke apho ufuna khona ngaphandle kokukhathazeka malunga neplagi kunokuhlawula abasebenzisi abaninzi, kwaye isicelo esenziwe kakuhle senza ukuba ibe yenye yezona ndlela zibalaseleyo ezikhoyo kwintengiso ngoku. Ungayifumana kwi- Amazon malunga ne- € 218, ixabiso elingaphezulu kwezinye iimodeli zokhuphiswano kodwa liphantsi kwintsebenzo.
I-Logitech Circle 2
Idityaniswe ibhetri yokusetyenziswa kwentambo
Izixhobo zokubeka iifestile okanye iziseko
1080p 180º ukurekhoda ngombono ebusuku
Ngaphandle kweKhayaKit ukuba siyisebenzisa nebhetri
Isiseko kufuneka sibekwe kwindiza engenakusebenziseka
Iimpawu ezihlawulwa kuqala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » I-Logitech Circle 2, ikhamera eguquguqukayo efana nayo
Ngaba kunjalo nakwiiPixel Buds Earphones, ukhuphiswano kwii-AirPods?